Diego Costa oo dhaawac looga saaray xulka Spain, iyadoo bedelkiisana loo yeeray – Gool FM
(Madrid) 10 Nof 2016 – Dhaliyaha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Diego Costa ayaa dhaawac looga saaray xulkiisa Spain ee Talaadada soo aaddan la dheelaya xulka England.
Xulka qaranka Spain ayaa bedelka Diego Costa u yeertay weeraryahankii hore ee kooxda Liverpool Iago Aspas, waxaana wararku ay intaa ku darayaan in Costa uu sidoo kale seegayo kulanka Sabtida ee xulkiisa Spain uu la dheeli doono Macedonia ee isreeb-reebka Koobka Adduunka.
Waxaa shalay la wariyey war sheegayey in Costa uu dhaawac gumaarka ah la yimid tababarka xulka Spain, waxaana jiray shaki shalayba laga muujinayay taam ahaanshihiisa, isagoo aan ka qeyb qaadan tababarkii shalay.
Xiddiga asal ahaanta ka soo jeeda Brazil ayaa qaab ciyaareed aad u cajiib ah ku jira kal ciyaareedkan isagoona hoggaanka u haya gool dhalinta horyaalka Premier League.
Marka la eego dhanka kooxda Chelsea oo uu weeraryahankan ka tirsan yahay waxaa ku soo socda kulamo adag horyaalka Premier League, iyadoo 20-ka November la ciyaaraya Middlesbrough, kaddibna waxa ay la dheeli doonaan Tottenham, waxaa ugu sii xiga kulan ay u safrayaan kooxda Pep Guardiola ee Manchester City.